I-Semalt ichaza ukuba yiziphi iikhono ozifunayo ukuze ufunde i-Web Scraping
Ukuba ufuna akunakwenzeka ukuba uqokelele idatha ngokukhangela kwiGoogle. Ngamanye amaxesha kufuneka sisebenzise abancinci bee-web kunye ne-data scrapers ukuze benze iiprojekthi zethu zenzeke, ngamanye amaxesha kufuneka sihlakulele izakhono ezisisiseko. Kuyinyani ukuba iinjine zokukhangela zingakunceda ufumane oko ufuna, kodwa kufuneka uphuhlise izakhono ezilandelayo ukuze uphumelele - best of chile tours.
1. Ikhono lokufunda ifayile ye robots.txt
Kufuneka ukwazi ukufunda nokuhlela iifayile zeerobhothi.txt ngokufanelekileyo. Le fayili isetyenziselwe ukunciphisa abaqheqhi ukuba bangabetha indawo yakho rhoqo. Ngexesha elifanayo, kukunceda ugcine umgangatho weenkcukacha zakho kunye nokuphucula isantya sewebhusayithi yakho kwiindwendwe zabantu. Yingakho kufuneka ufunde indlela yokuhlela ifayile yeerobhothi.txt. Xa ulungisile le fayile ngokufanelekileyo, uya kukwazi ukulahla iibhokhwe ezimbi ezingahambisani nemigaqo nemigaqo yeenjini zokukhangela. Ukongezelela, unokujolisa kumaphepha ewebhu ahlukeneyo ngexesha elifanayo kwaye unokwenza okanye ukhiphe idatha efunwayo ngokufanelekileyo.
2..Ukusekwa kweziseko zedatha
Kubaluleke kakhulu ukusekela isiseko seziseko njengoko kuza kuvula idatha yekhwalithi kwi-website yonke. Ngokomzekelo, kufuneka ufunde i-SQL, i-PHP kunye nezinye iilwimi ezifanayo njengoko zikunceda ukugcina izibonelelo zedatha yakho ngendlela engcono. Ukubonelela nge-SQL kunye nokusekwa kweziseko zophuhliso zedatha kunokukunceda ukuba ube ngumhlaziyi-self-servist, ukufumana idatha echanekileyo nechanekileyo kakuhle kwiminithi embalwa.
4. Ikhono lokubhala nokulinganisa i-bots
Kufuneka ukwazi ukwahlula i-bots ezilungileyo kunye neendawo ezimbi. I-bots ezilungileyo zikunceda i-website yakho kwisiphumo se-injini yokukhangela, ikunike idatha ehlelwe kakuhle kunye nephezulu. Ngakolunye uhlangothi, iibhokhwe ezimbi ziyingozi kwindawo yakho kwaye aziyi kukufumana idatha echanekileyo. Akudingeki nje ukuba uhlukanise zombini i-bots ezilungileyo kunye neendawo ezimbi kodwa kufuneka ubhale kwaye ulinganise i-bots. Kufuneka ukhumbule ukuba i-bots yinyathelo elilandelayo ekuveleni kwekhompyutha kunye nokusebenzisana kwabantu. Kuthetha ukuba uyazi malunga nebhobho kwaye ubhale njalo, eziphakamileyo ziya kuba ngamathuba akho ukuba ahlalutye idatha yekhwalithi kwaye asebenzise inxaxheba kwishishini lakho.